Waraysi: Ganacsatada Koonfur Afrika - BBC Somali - Ganacsi
Waraysi: Ganacsatada Koonfur Afrika
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Maarso, 2013, 18:40 GMT 21:40 SGA
Soomaalidu inta badan waxay ku howlan yihiin ganacsiyo kala duwan.
Ganacsata Koonfur Afrika
Soomaalidu inta badan waxay ku howlan yihiin ganacsiyo kala duwan. Qaar ayaa leh xarumo ganacsi oo waawayn, qaar dukaamo jumlo, qaarkood dukaamo ay ku iibiyaan tafaariikhda iyo qaar iyagu wax ku iibiya tuulooyinka oo dukaamo ka furta halkaas oo ah goobaha ugu badan ee ay ka soo gaaraan dhibaatooyinka dilka iyo dhaca isugu jira.
Waxaa kaloo jira qaar kale oo garab rararo ah oo wareejiya alaabo kala duwan iyo kuwo miisas dushooda waxyaabo kala duwan ku iibiya.
Hadaba Cabdiraxmaan Koronto, ayaa dhowaan mar uu tagay magaalada Johannesburg kula kulmay laba dhalinyaro ah oo miis ku iibinaya faras magaalaha magaalada Cape Town.